Toekarena Nitotongana ny sandam-bola Ariary
Nitotongana indray ny ariary ka niakatra kely ny sandan’ny vola vahiny na dolara io na euro ; hita mba efa nahazo aina kely ny vola Malagasy tato anatin` ny tapa-bolana teo anelanelan`ny 8 ka hatramin`ny 20 martsa teo.
Raha ny hita omaly, tafakatra 4022,52 Ariary ny Euro iray, raha 3553,60 Ariary ny Dolara Amerikanina. Hisy fiantraikany amin’ny fiainana andavanandron’ny olona sy ny toekarena Malagasy izany. Ho lafo kokoa mihoatra ny teo aloha ny vidin`ny entana ka hihena ny fahefa-mividin’ny Malagasy. Hisy fiantraikany eo amin’ny vidin’ny solika ihany koa satria tsy maintsy haloan’ny mpandraharaha ara-tsolika ny elanelam-bidy ka hampakatra ny vidin’ny solika. Etsy an-kilany, mibitaka kely ny fanjakana fa nahazo tohana ara-bola amin`ny alalan` ny FEC andiany faha-4. Eo amin’ny lafiny politika anefa no mety hiteraka olana, indrindra eo amin’ny fahatokisana ilay governemanta mitsangana amin’izao satria io mety hisy akony eo amin’ny toe-draharaha ara-toekarena. Azo hitokisana ve io governemanta mitsangana io ? Io fahatokisana io na tsia no hibaiko ny tsena sy ny fandraharahana :misy hanao tombantombana raha hitany fa metimety dia tsy hanangona entana, fa raha mifanohitra amin’izay dia misy hanangona entana sy hanangom-bary indray dia tsy hisy indray ny vary eny an-tsena ka hiaka-bidy. Tokony hojerena ny toe-draharaha politika eo amin’ny fifandraisana amin’ny fanakalozana volantsika sao vao mainka hampitotongana ny ariary, satria raha vao tsy marin-toerana ny toe-draharaha politika dia misy akony avy hatrany any amin’ny toekarena izany.